जानकी मन्दिरको ढोका खुल्यो! यसरी गर्न पाईन्छ जानकी मन्दिरको दर्शन – PathivaraOnline
Home > धर्म सँस्कृति > जानकी मन्दिरको ढोका खुल्यो! यसरी गर्न पाईन्छ जानकी मन्दिरको दर्शन
जानकी मन्दिरको ढोका खुल्यो! यसरी गर्न पाईन्छ जानकी मन्दिरको दर्शन
admin September 24, 2020 धर्म सँस्कृति, समाचार	0
जनकपुरधाम, ६ असोज । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण महिनौदेखि बन्द रहेको जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिर दर्शनार्थीका लागि खुल्ला गरिएको छ ।
केन्द्र, प्रदेश सरकारका कुनै पनि निकायले मन्दिर खोल्ने निर्णय नगरेपनि श्रद्धालुहरुको दबावपछि आइतबारदेखि मन्दिर खुल्ला गरिएको मन्दिरका उत्तराधिकारी रामरोशन दासले बताउनुभयो ।
अहिले दैनिक ३ सयदेखि ४ सयसम्म दर्शनार्थी आइरहेका छन् । उनीहरुलाई दूरी कायम गरी दर्शन र पूजापाठ गर्न दिइएको उनले बताए । मन्दिर खुलेसँगै यहाँ पूजा सामग्री बेच्ने पसलहरु पनि संचालनमा आएको छ । मन्दिर आसपास भएका मिठाइ, फुल तथा अन्य सामग्रीका पसल संचालनमा आएको छ ।
यसअघि मन्दिर बन्द गरिए पनि भित्र पूजापाठ नियमित भइरहेको थियो । लकडाउनका कारण मन्दिर बन्द गरिँदा यस पटकको राम नवमी, सीता नवमीसहितका पर्वहरु खल्लो देखिएको थियो ।
नेपालमा पनि झापाका १०६ वर्षिय हजुरबुबाले जिते कोरोनालाई
यी जिल्लामा अहिलेकै क्रममा संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पुन: लकडाउन हुने!